Amin'ny ankapobeny, mividy mpanadio vovo ao an-trano izahay hikotrana fako, fa raha ny tena izy, zavatra maro no tsy azo forohana, ary mety tsy dia fantatrao tsara. Ka anio isika dia hiresaka momba izay tsy azo entin'ny mpanadio banga. Aza adino ny mijery akaiky kokoa ary aza manao zavatra manimba voly ...
Amin'ny maha fitaovana lehibe fanadiovana ao an-trano azy ireo - ny fanadiovana ny banga, mitana andraikitra lehibe tokoa izy io, saika ny fianakaviana tsirairay avy dia fitaovana ilaina. Ny vacuum cleaner dia tena mora ampiasaina, fa maro ny olona tsy mankafy fanadiovana sy fikojakojana ny fanadio. Andao hianatra ny fomba fanadiovana sy fikojakojana ...
Ny orinasan-tsika dia efa 10 taona, ary miezaka foana izahay manome ny vokatra mety indrindra ho an'ny mpanjifanay, manamarina ny sanganasa alohan'ny handefasana azy izahay, manantena izahay fa ny sombin-tànana amin'ny mpanjifanay dia tsara sy mahay. Fa fantatray izay manana vokatra taloha ihany no tsy ampy, mba gi ...